Banyere Anyị - Shenzhen Tryace Technology Co., Ltd
Shenzhen TryAce Technology Co., Ltd bụ otu nke na-eduga na-emepụta tụnyere R & D, mmepụta na ahịa nke sọrọ gbaara cam, 4k gbaara cam, wifi gbaara cam, obere gbaara cam, zoro gbaara cam, mirror igwefoto ....
Anyị melite a set nke àgwà akara usoro, dị ugbu a, anyị nwere ihe karịrị 10 QC ọrụ, na-erube nnọọ zuo ezu ISO9001.Our ngwaahịa ih'ùgwù asambodo nke OA, FCC, CCC, RoHS, na IP68. Anyị nwere afọ 15 nke mbupụ ahụmahụ, na-enye ọrụ na-amụba OEM na ODM iwu na America, Europe, North America na Southeast Asia. Na anyị ahia otu dị njikere ejere gị ozi.
"Mere nkịtị ka ọhụrụ" bụ a nlekọta echiche na anyị anọgide na na-ebu gaa n'ihu. N'otu oge ahụ, ọ bụ ihe mgbaru ọsọ ọ bụla TryAce onye nāchu. Anyị kwere: Na kwadoro gburugburu ebe obibi na-etolite a adabako ọha mmadụ na a nchekwa China na na nkwado na agbamume anyị na-enweta site na ọtụtụ ndị TryAce s-eguzosi ike n'ihe ndị ahịa na bụla ije nke ndụ, anyị, dị ka ndị ọhụrụ na mmume, ga-zuru uru nke isi obodo, technology, talent na management anyị nwere obi ike na ịgagharị na innovating ọhụrụ ngwaahịa, na-eme ihe onyinye maka a mma echi nke mba anyị na ụwa na okporo ụzọ nchekwa.